Nanolotra vola mitentina 1.1 tapitrisa dolara amerikana i Canada ho an'ny fampianarana fandriampahalemana any Filipina - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Nanome 1.1 tapitrisa dolara amerikana i Canada ho an'ny fampianarana fandriampahalemana any Filipina
Aogositra 26, 2021 Vaovao sy hevi-dehibe 1
(Navoaka avy amin'ny: Ny Hub Broadcast of Philippines. 18 aogositra 2021)
MANILA, Filipina - Kanada dia manome famatsiam-bola fanampiny mitentina 1.1 tapitrisa dolara amerikana na manodidina ny P44 tapitrisa amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana any Filipina, araka ny fampitam-baovao navoakan'ny masoivoho kanadiana ao amin'ny firenena.
Manokana, ny governemanta kanadiana dia nanaiky ny famoahana io vola voalaza io mba hanitarana ny fampiharana ny "1001 Nights Civic and Peace Education Program" mankany amin'ny faritra mizaka tena Bangsamoro ao Muslim Mindanao (BARMM).
Ny Animating Change: Tetikasa 1001 Nights dia mikendry ny hanohanana ny fitohizan'ny fianaran'ny ankizy kilasy efatra ka hatramin'ny enina mandritra ny areti-mandringana COVID-19, sady mampiroborobo ny fandriampahalemana sy ny fitoniana ao amin'ny BARMM.
Ny "1001 Nights" dia programa fialamboly fanabeazana marobe izay mampiasa sariitatra hampianarana ny fahaizan'ny zaza fiainana sy ny soatoavina maha-olom-pirenena, ao anatin'izany ny tsy herisetra, ny zon'olombelona, ​​ny demokrasia ary ny fitovian'ny lahy sy ny vavy, na eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ofisialy na tsy ara-potoana.
Amin'ny fampitomboana ny fahafantaran'ny ankizy ny soatoavina sivika, ny tetikasa dia mikendry ny hampihenana ny faharefoan'ny ankizy ao amin'ny BARMM amin'ireo mpamily tsy filaminana.
Ity tetik'asa ity dia hanome fiofanana sy fanampiana ara-panabeazana ho an'ny ankizy 50,000 30,000 (zazavavy 5,000), ray aman-dreny / mpikarakara 3,000 (vehivavy 1,500), ary mpampianatra 1000 100 (vehivavy XNUMX) any amin'ny sekoly XNUMX ao amin'io faritra io.
Hatolotry ny Big Bad Boo Studios, Inc. monina any Vancouver izy io, miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Ministeran'ny Fanabeazana Fototra, Ambony ary Teknika BARMM.
Ny "1001 Nights Civic and Peace Education Programme" dia miorina amin'ny andian-tsarimihetsika malaza iray malaza sy nahazo loka antsoina hoe "1001 Nights", izay nalefa ho fialamboly ara-barotra amin'ireo tambajotra fahitalavitra voalohany any amin'ny firenena 70 mahery ho an'ny mpihaino manerantany mihoatra ny 100 olona an-tapitrisany.
Fampianarana # olom-pirenena
Iza no tena voakasiky ny fantsom-pianarana any amin'ny fonja?
Nepal: Lesona manomboka amin'ny fampidirana ny fandriam-pahalemana, ny zon'olombelona, ​​ary ny fanabeazana ho olom-pirenena amin'ny fandaharam-pianarana sy boky fampianarana
Febroary 25, 2017 Fampitaham-baovao, Research 3
Nanomboka ny taona 2007 ka hatramin'ny 2012, ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena (MoE) an'ny Governemanta Nepal dia niara-niasa tamin'i Save the Children, UNESCO, ary UNICEF hanitsy ny fandaharam-pampianarana nasionaly momba ny fampianarana sosialy. Ny tanjona dia ny hampiroborobo ny fanabeazana ho an'ny fandriam-pahalemana, zon'olombelona, ​​ary fanabeazam-pirenena (PHRCE) taorian'ny fikomiana Maoista 10 taona sy ny tetezamita tany amin'ny repoblika demokratika. [tohizo ny famakiana…]
Mpampianatra 6,000 naparitaka mba hampiroborobo ny fandriampahalemana ao Mindanao (Filipina)
Jolay 25, 2018 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Mpampianatra 6,000 eo ho eo no naparitaka tany amin'ny faritany dimy atsimo tao anatin'ny dimy taona lasa izay izao dia mazoto manampy amin'ny fampielezana ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpianatra ho fanohanana ny ezaka fandriam-pahalemana ataon'ny governemanta Mindanao. [tohizo ny famakiana…]
Mania ary mahaliana: Ny tetik'asa fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana sy ny tantara ao Mindanao-Sulu (Filipina)
Aprily 27, 2017 Vaovao sy hevi-dehibe, Policy 0
Ny lalàna repoblika laharana 10908 dia manome baiko ny fampidirana ny tantaram-piainana, ny kolotsaina ary ny maha-teratany Filipiana-Silamo sy Indizeny azy amin'ny fandalinana ny Tantaran'i Filipina amin'ny fanabeazana fototra sy avo kokoa. Ny lalàna dia manaiky ny tanjona faratampony amin'ny famoronana tantara misy kaonty ho an'ny Filipiana rehetra. Saingy misy tsy fahampian'ny loharanom-pahalalana momba ny tantara, zavakanto, literatiora ary fiteny Bangsamoro sy Lumad. Ny tetikasa Mindanao-Sulu History and Peace Education Project dia mikendry ny hamaly izany filàna izany. [tohizo ny famakiana…]
Mohammad Ashraf Ali hoy:
Aogositra 26, 2021 amin'ny 9: 40 am
Mila maka tahaka any India isika. Izahay the RightvTrack Fikambanana Fiarahamonim-pirenena monina any Kolkata miasa hatramin'ny 30 taona miaraka amin'ny fomba Integrates ho an'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina, izay ny fizotran'ny Peace Peace no iray amin'ireo paikadinay. Raha miara-miasa isika dia hahazo vokatra tsara kokoa amin'ny andro ho avy.